Homeसमाचारसुशान्त र साराको प्रेम कति समय चल्यो ? साराले खोलीन् यस्ता रहस्य….
October 1, 2020 admin समाचार 13034
भारतीय लोकप्रिय नायिका नायिका सारा’अली खानले एक समय आँफु नायक सुशान्त सिंह राजपुतसँग प्रेममा रहेको तर केही समयमा नै ब्रेक’अप भएको बताएकी छिन् ।
साराले आँफु’हरु चलचित्र ‘केदारनाथ’ सुटिङका क्रममा ना’यक सुशान्त सिंह राज’पुतसँग आफ्नो प्रेम रहेको उल्लेख गर्दै सुशान्तले धो’का दिएपछि आँफुहरुको ब्रे’कअप भएको रहस्य एनसीबी’सँगको बया’नका क्रममा खोलेकी हुन् ।
सारा’का अनुसार उनीहरु चलचिको सुटिगंमा प्रेममा रहेका उनीहरु सन् २०१९ को जनवरीमा अल’ग भएको साराले बयानमा उल्लेख गरेकी छिन् । साराले आँफुले ड्र ग्सको सेव’न नगरेको एन’सीबीसँगको बयानका क्रममा जानकारी दिँदै भनिन् तर सुशान्तले भने नियमित रुपमा नै ड्र ग्स लिँदै आएका थिए ।
केदारनाथ’को सुटिङका क्रममा सुशान्त’ले ड्र ग्स लिएको र आँफु सुशान्तको पार्टी’मा पनि सहभागी भएको साराले बयानका क्रममा जा’नकारी दिइन् । कुरा खोल्दै जाँदखा साराले सु’शान्तसँग केही समय उनको घरमा रहेको बताइन् ।
त्यस्तै सारा र सुशान्त प्रेम’मानै रहेको समयमा ५ दिनका लागि थाइल्याण्ड टुर’मा पनि गएको उनले रहस्य खोलेको भारती’य मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । एजेन्सी
December 3, 2020 admin समाचार 9534
केही सम’यदेखि मिडियामा एकसाथ श्रीमान श्रीमती हराएका घटना’हरु आइरहेका छन । यसैबिच आज पनि हामी त्यस्तै एउटा अर्को द’र्दनाक घटना लिएर आएका छौ । घटना हो काठमाडौ बुढानि’लकण्ठको ज“हा श्रीमान क्षेत्र प्रसाद श्रेष्ठको जो केही
January 16, 2021 admin समाचार 7421
May 15, 2021 admin समाचार 6399